Dowlada Soomaaliya oo Shaacisay in si rasmi ah ula wareegtay Maamulida Hawada Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Dowlada Soomaaliya oo Shaacisay in si rasmi ah ula wareegtay Maamulida Hawada...
Sii hayaha Xilka Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumada Soomaaliya Siciid Jaamac Qoorsheel, oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa shaaca ka qaaday in Dowlada Soomaaliya mudo sanado badan kadib ay ku guuleesatay in ay dib usoo ceshato Maamulida Hawada Dalkeena.
Wasiirka oo maanta Warbaahinta kula hadlay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dadaalo badan ku bixeen sidii maamulida hawada Soomaaliya dib gacanta umada Soomaaliyeed loogu soo celin lahaa ugu dambeyna ay ku guuleesteen.
Siciid Jaamac Qoorsheel ayaa xusay in afartii bishan aan ku jirno si rasmi ah ula soo wareegeen Maamulida iyo koontaroolka hawada Soomaaliya, waxa uuna intaa raaciyay in dhawaan hawada Soomaaliya laga maamuli doono Magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay in hada Muqdisho uu kasocdo dhismaha Taawarka uuna gabo gabo marayo, waxa uuna intaa raaciyay marka ay howsha dhismaha bilaabato in maamulida iyo koontaroolka hawada Soomaaliya laga hagi doono Muqdisho, ayna dalka kusoo laabanayaan Soomaalida hada ka shaqeysa xarunta laga maamulo hawada Soomaaliya ee kutaala Magaalada Nairobi.
Sii hayaha xilka Wasiirka Duulista iyo Gaadiidka ayaa sheegay in Dhalinyaro Soomaaliyeed ay u tababarayaan Howlaha lasocodka iyo maamulida hawada dalkeena, waxa uuna inta kasii horeesay sheegay in shaqada ay sii wadi doonaan Soomaalida hada arintaasi ka shaqeysa.
Hawada Soomaaliya mudadii qaran bur burka lagu jiray waxaa maamulkeeda gacanta ku heysay Hay’adaha Qaramada Midoobay, waxaana hawada Soomaaliya laga maamuli jiray Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya.